तोकिएको मितिमा सिनेमा रिलिज गर्न किन डराउँछन निर्माता ?
पछिल्लो समय सिनेमाको रिलिज मिति तय गर्ने र पुनः सार्ने क्रम निर्माता निर्देशकहरुको नियती नै बनेको छ । कसैले सुरुमा नै हतार गरेर सिनेमा रिलिजको मिति तय गर्छन त कसैले संधै सारिरहन्छन् । यस्ता प्रसस्त उदाहरण हामीमाझ छन, जो रिलिजको लागी तयार सिनेमा रिलिज गर्न नै डराउँछन पनि । यो बीचमा निर्माताले नै रिलिज नगरौँ भनेर रोकिएको र अहिले प्रदर्शनको तयारीमा रहेको सिनेमा ‘माई प्रमिस’ पनि एक हो । एक्लै पब्लिसिटीमा जुटेका निर्माता रमेशचन्द्र राई यस्तै गुनासो गर्छन् । यसैबीच पौष ११ लाई प्रदर्शनको मिति तय गरेको सिनेमा ‘नतिजा’को रिलिज मिति पोष्टपोण्ड भएको छ । एक बर्ष पहिले नै रिलिजको चर्चा भएपनि सेन्सर र आन्तरिक कारणबस पोष्टपोण्ड भएको यो सिनेमाको रिलिज मिति एक महिना पहिले पौष ११ लाई तोकिएको थियो । तर निर्देशक प्रमोद भण्डारीका अनुसार सिनेमा अर्को मिति नतोकिन्जेलको लागी रिलिज पोष्टपोण्ड भएको छ । जाडो बढ्नुलाई मात्रै सिनेमाको रिलिज पोष्टपोण्डको कारण मानिएको छ ।
यस्तै कमजोर पब्लिसिटीका बीच दर्शकमाझ आउने भनिएको सिनेमा ‘डि. कम्पनि’ पनि पोष्टपोण्ड भएको छ । जानकारीमा आएअनुसार यो सिनेमा पनि नयाँ मिति तय नहुन्जेलको लागी पोष्टपोण्ड भएको छ । सिनेमा पौष ४ मा दर्शकमाझ आउने बताईएको थियो । त्यस्तै सिने नगरीमा नै गाईंगुईंसम्म हल्ला नचलेको अर्को सिनेमा ‘उधूम’ पौष १८ मा दर्शकमाझ आउने जानकारी गराईएपनि भित्रभित्रै यो सिनेमाको निर्माण युनिट मिति सार्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।
खासमा पौषको महिनालाई नेपालमा सिनेमा रिलिजको लागी उपयुक्त मानिँदैन् । जाडोको समय भएकोले पनि निर्माता, निर्देशकहरु यो महिनामा सिनेमा प्रदर्शनको लागी डराउँछन् । तर सबै निर्माताहरुमा भने यो कुरा लागु नहुन सक्छ । किनकी पौष महिनाको नै २५ गते तीन चर्चित सिनेमाको भिडन्त हुने निश्चित देखिएको छ । ‘तथास्तु’, ‘आभाष’ र ‘अलबिदा’ तीन सिनेमा पछिल्लो समय चर्चाा रहेका सिनेमा हुन, तर यी तीन सिनेमाकै निर्माण युनिट सोही मितिबाट पछि नहट्नेमा प्रतिबद्ध देखिएको छ ।
तर भित्रभित्रै पौष भित्रै रिलिज हुने भनिएका अन्त एक/दुई सिनेमाको समेत रिलिज सार्ने तयारी भईरहेको श्रोत बताउँछ । वितरण कम्पनि जुध्नु अनि अन्तिममा अन्य दुई/तीन सिनेमासँग भिड्नुपर्ने बाध्यताका बीच सिनेमा सारिने तयारी भईरहेको बुझिएको छ ।
नेपालीमा उखान छ, ‘पुष, फासपुस’ यानेकी, यो महिनामा छोटो दिन हुने भएकोले होला १२ महिनाभित्र यो महिना आएको गएको कमैलाई पत्तो हुन्छ रे ! यसरी नै सिनेमा निर्माताहरुलाई पनि आफ्नो सिनेमा आएको गएको पत्तै नहुने डर पनि लागेको हुनसक्छ । तर जे होस, सिनेमाको रिलिज मिति तोक्नु अबि अन्त्यमा सारिनु सम्बन्धित सिने युनिटलाई नै घाटाको बिषय हो । त्यसैले रिलिज मिति तय गर्नुभन्दा पहिले एक पटक सोच्ने की ?